Novice ma ọ bụ ahụmịhe, O doro anya na ị nụla banyere Bwin ka saịtị ịkụ nzọ egwuregwu mba ụwa, kamakwa otu n’ime ama ama na France. O bu ihe nlere anya zuru oke inye gi ikike inwere onwe gi nke igha ka igha egwuregwu. Bwin na-arụ ọrụ na ịkụ nzọ egwuregwu, poker na cha cha.
Inrụ ọrụ na otu narị mba, gụnyere France, O doro anya na ọ nwere ebe n'etiti saịtị ịkụ nzọ egwuregwu obodo kacha mma. Bwin bụ onye ya na ya na-eme egwuregwu klọb a ma ama dịka Real Madrid ma ọ bụ AC Milan. Ntụle Bwin, anyị ga-atụle enye, ebe ị ga-ekwu, nnabata ego, ya koodu Koodu, na ụdị ịkụ nzọ na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ. Yabụ, ị maara otu ị si amasị ịkụ nzọ egwuregwu Bwin.
Bwin.fr nwere ike ịbụ ihe ị ga - akpọ paradaịs onye gamer. Cheedị echiche: weebụsaịtị nke na-enye poker na egwuregwu egwuregwu!
Bwin alaghachila n'ahịa kemgbe 1997! Ọ na-enye okirikiri kachasị ọnụ ị nwere ike ịchọta na ịntanetị.
N'ihi ntụkwasị obi ya, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara ike ịmalite ọrụ dị mma yana onyinye nkwado mara mma na uru dị ukwuu.
Robert Pires nke bụbu onye egwuregwu mba mba ọzọ sonyere Bwin, onye kwuputara ọtụtụ ọrụ pụrụ iche maka ndị egwuregwu!
Yabụ na anyị hụrụ ọtụtụ ndị egwuregwu na bwin.fr. Ime ụlọ poker dị n'akụkụ na-enwe ọ softwareụ ngwanrọ na Mac dakọtara, na otutu asọmpi na ihe omume ndị ọzọ. I nwere ike choro iru eru maka asọmpi satịlaịtị buru ibu na oge ị na-enye.
Ma n'ezie, ọ ga-ekwekwa omume ịchọta ebe ndị a na-eme egwuregwu poker ọ bụla, nke bụ asọmpi nkịtị ma ọ bụ nke ga-aga n'ihu maka mmefu ego niile, freerolls, na tebụl egwuregwu tebụl ego.
Ngalaba egwuregwu Paris dịkwa mma nke ukwuu, ya na onyinye zuru oke maka obodo French. Saịtị a bara uru ma dị mma ịnyagharịa, na nzọ kwesịrị inye onye ọ bụla ohere ịchọta obi ụtọ ha.
Nkwalite bụ otu n'ime isi okwu Bwin, bụ onyinye ego, mpi egwuregwu ma ọ bụ tiketi ịkụ nzọ (ma ọ bụ dochie) maka ndi egwu ohuru.
A na-ahazi asọmpi pụrụ iche mgbe niile, ya na onye a na-akwanyere ugwu!
N’ikpeazụ, ị nwere ike ịnụ ụtọ Bwin niile (poker na ịkụ nzọ egwuregwu) Na ekwentị gị site na ngwa nbudata.
Na nkenke, ma ọ bụrụ na-amasị gị poker na egwuregwu ịkụ nzọ, enwere ohere ka gi na Bwin nwee otutu obi uto… ma imeri!
Saịtị ahụ : Ntụnyere na-egosipụta Ọkachamara Bwin
Saịtị Bwin nwere ngosi dị mma, ya na ndi isi ojii mara nma nke na-eziga obere ihe. N’elu peeji, ị gaghị enwe nsogbu ịchọta akụkụ ọzọ nke saịtị ahụ bụ akụkụ nke egwuregwu ahụ, nkwalite, asọmpi, egwuregwu poker, wdg. Site na ịpị "Paris Sport", ị ga - enwe peeji kacha mma ga - egosi ịkụ nzọ egwuregwu Bwin, egwuregwu, Kpochapu ego, pụta ìhè ozugbo, ụdị nza na ọtụtụ ozi ndị ọzọ.
Ergonomics dị mkpa ma weta aha egwuregwu Bwin a. Ma ị bụ onye mbido ma ọ bụ nwee ahụmịhe, ị ga-enwe ekele maka ọsọ nke igodo na ngosipụta nke saịtị ahụ. Ma n'ezie, ị ga - ahụ ngwa ngwa bọtịnụ "aha" / akwụkwọ akụkọ »« na elu aka nri nke ihuenyo gị.
Ndebanye aha dechara n’ime nkeji ole na ole
EGO EGO, NWAANY AND NA UMUAKA
New dị ọhụrụ ịkụ nzọ egwuregwu ma ọ bụ ịnwale, ị nwere ike họrọ ụdị dị iche iche nke Bwin bet.
Ọ bụrụ na ị masịrị ekwentị (nzọ na ọtụtụ egwuregwu n'otu oge), bwin a ani nye wo 50% (kari Multicash), dika ọnụọgụ nzọ dị na nhọrọ gị! Yabụ, onyinye ga-adị 5% site na 3 jikọtara ọnụ paris (ọ bụrụ n’imeri aka gị), ruo mgbe 50% nke ndị mmeri ịkụ nzọ ọnụ jikọtara ọnụ 13 ma ọ bụ karịa.
Can nwere ike nzọ karịa 20 egwuregwu ọzụzụ na-adịgide adịgide: bọọlụ na ngalaba niile na asọmpi niile (na obere nwa) gburugburu ụwa, tenis, bọọlụ, bọọlụ aka, F1, ọgba tum tum, hockey, bọl volley, rugby , table tenis, ịnyịnya ígwè, ịkụ ọkpọ, na okpokoro isi, football american, golf, sọọsọ, billiards ... ghara ikwu maka oge pụrụ iche.
N'ezie, will ga-enwe ike ịkụ ndụ, ihe di nkpa ubọchi ndia, ọkachasị na anyị smartphones!
ego egwuregwu poker na-eme na mgbakwunye egwuregwu egwuregwu (egwuregwu bọọlụ) site na usoro asọmpi ahụ, tinyere sit-na-na nke ọhụrụ ha (otu na tebụl ọtụtụ, Ogba égbè, buru onyinye maka onyinye, ụyọkọ miri emi, ije, …) , n'asọmpi a na-akwụgo nke ọma, isi asọmpi usoro (okpoko pokerị), jackpot ọhụrụ sit-na-aga turbo ( "JAQKpot" na Bwin) site na ihe enwetara ruo 5000 oge ntinye ego, ịghara ịkọ maka asọmpi n'efu (freerolls).
10.000 € kwa ụbọchị onyinye ego na-ekwe nkwa nke asọmpi mgbe niile, 25 000 € Sọnde, ma rue 100 000 € kwa ọnwa!
Nwekwara ike iru eru maka asọmpi ndị dị ndụ, gụnyere mba ụwa egwuregwu bọọlụ Poker (gụnyere bwin / PartyPoker bu onye ibe)!
Next Next post: Bwin ego